Fitbit Charge 2 na Fitbit Flex 2, ihe eji eyi ọhụụ abụọ dị ugbu a | Akụkọ akụrụngwa
Joaquin Garcia | | Ngwaọrụ yi, Ngwa
Anyị anụwo ogologo oge banyere uwe ọhụrụ abụọ sitere na Fitbit, ngwaọrụ ndị yiri ka ha na smartwatches dị ugbu a na ndị otu egwuregwu siri ike karị. Ugbu a ngwaọrụ Fitbit ọhụrụ ahụ bụ eziokwu na enwere ike zụta site na weebụsaịtị Fitbit.
Fitbit Charge 2 y Fitbit Flex 2 Ha bụ ndị ọhụrụ Fitbit wearables, ngwaọrụ ndị nwere ngwaike dị ike na ọnụ ala dị ọnụ ala. Nke mbụ nwere nsụgharị pụrụ iche nke dị ntakịrị ọnụ ma dezie ya n'otu oge.
Fitbit Charge 2 bụ ihe eji ejiji a 1,5 anụ ọhịa ahụ oled ihuenyo. Charge 2 nwekwara njikọ bluetooth nke na-enye anyị ohere iji Fitbit Charge 2 dị ka smartwatch nke na-anata ọkwa na ozi ndị ọzọ site na mkpanaka. Ọ ga-enwe GPS na obi nyocha iji nyochaa obi anyị. Ọbụna anyị nwere ike ịmepụta usoro iku ume. Ọnụahịa nke Fitbit Charge 2 bụ euro 159,95, ọnụahịa nke anyị ga-atụkwasị ọnụahịa nke eriri ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbanwe ya. Ọnụahịa ahụ nwekwara ike ịdị elu karịa ma ọ bụrụ na ịhọrọ maka mbipụta pụrụ iche nke ngwaọrụ ahụ, na nke a, anyị na-ekwu maka euro 189,95.
Fitbit Charge 2 nwere ike ịbụ nnukwu ihe ọzọ na smartwatch
El Fitbit Flex 2 ọ bụ ọnụ ahịa dị ọnụ ala karịa kamakwa ihe yiri nke a ike gbalaga. N'okwu a anyị na-ekwu maka ngwaọrụ na-enweghị mmiri, akụkụ etiti nwere ọkụ nwere agba ise ejiri mara ịma ọkwa yana arụ ọrụ. Bụ enwere ike ịgbanwe ihe ọ bụla n'etiti eriri ọ bụla na ngwa mgbakwunye dakọtara, yana Xiaomi Mi Band 2 dị ugbu a. Fitbit Flex 2 nyochaa mmega igwu mmiri anyị na-eme yana ụdị mmega ahụ ndị ọzọ anyị na-eme, ọ bụ ezie na a ga-amata ozi nke nnọkọ site na ngwa mkpanaka.
Fitbit Flex 2 dị ọnụ ahịa na euro 99, ọnụahịa na-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na anyị echee na wearable ga-enwe usoro nke 5 ụbọchị, ihe nke ngwaọrụ ole na ole na-enye ugbu a.
Ngwaọrụ Fitbit ọhụrụ ahụ na-ekwe nkwa mgbe anyị nụrụ maka ha ma ugbu a anyị matara ọnụego ahụ, ha na-atọkwu ụtọ. Opekempe Fitbit Charge 2 nwere ike ịbụ nnukwu nnọchi maka ọtụtụ ndị na-achọ smartwatch ọnụ ma na oké ọrụ Kedu ihe ị chere? Think chere na ngwaọrụ Fitbit ọhụrụ abụọ a bara uru?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwaọrụ yi » Fitbit Charge 2 na Fitbit Flex 2, ihe eji eyi ọhụụ abụọ dị ugbu a